English Archives - myanmarpyi.com
အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာပြန်နည်း ကျနော်က textကို စာမသင်ခင် ဒီဘာသာပြန်နည်းကို စာသင်ချိန်(၅)ချိန်လောက်ယူပြီး သင်ပါတယ်။ ဒီနည်းက ကျနော့်ဆရာဦးမြကြိုင်ရဲ့နည်းကို အဆင့်နှိမ့်ထားတာပါ။ ဘာလို့အဆင့်နှိမ့်ထားလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီက ကျောင်းသားအများစုက ဆရာ့နည်းအတိုင်းသင်ရင် မလိုက်နိုင်လို့ပါ။ ကျနော့်ဆရာဦးမြကြိုင်က ပြောပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ဝါကျတွေဟာ Basic Sentence5မျိုးထဲက မထွက်ပါဘူးတဲ့ (1) Basic Sentence5မျိုး S + V [S = Subject (ပြု/ဖြစ်/ရှိသူ//ကတ္တား၊ V = Verb (တြိယာ)]… Continue Reading →
Phrases & Clauses (Sayar Ar Kar)
👉 Phrases & Clauses 👈 ❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆ Verb မပါတဲ့ စကားစုကို Phrase လို့ ခေါ်ပြီး Subject နဲ့ Verb ပါတဲ့ စကားစုကို Clause လို့ခေါ်ပါ။ Phrase ဆိုသည်မှာ ပြည့်စုံလုံလောက်သော အဓိပ္ပါယ်ကို မဖော်ပြနိုင်သည့်အပြင် Verb လည်း မပါရှိသောစကားစု ကို ဆိုလိုပါတယ်။ Phrase ( ၃ ) မျိုး အကြောင်း ရှင်းပြပါမယ်။ Noun Phrase Adjective Phrase… Continue Reading →
Determiners Part II (Sayar Ar kar)
👉 Determiners အကြောင်း ( အပိုင်း ၂ ) 👈 🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳 ✍ Determiner အကြောင်း(အပိုင်း ၁) မှာ The အသုံး ပြုပုံ အကြောင်းအရင်း ၃ ခု ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ 💎 The ဆိုတာက Definite Article ။ Noun တစ်ခုကို သီးခြားခွဲထုတ် ပြောချင်ရင် (သို့) တိတိကျကျ ပြော ချင်ရင် the ကို သုံးတယ်။ 💎 တစ်ကြိမ်ဖော်ပြပြီးတဲ့… Continue Reading →
Determiners Part I (Sayar Ar kar)
👉 Determiner အကြောင်း ( အပိုင်း ၁ ) 👈 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 🤔 Determiner ဆိုတာ ဘာလဲ? ✍ Determiner ဆိုတာ Noun ရဲ့အဓိပ္ပါယ် (သို့) အဆင့် အတန်းကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့စကားလုံး။ Noun ရဲ့ရှေ့ မှာ အမြဲတမ်းသုံးတယ်။ Noun နောက်မှာ ဘယ်တော့ မှ မရေးဘူး။ Determiners တွေကို အမျိုးအစားခွဲရရင် အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ 💎 Articles 💎… Continue Reading →
Gerunds & Infinitives Part I
Gerunds & Infinitives ❤❤❤❤❤❤❤❤ 💎 Gerund ဆိုတာ ဘာလဲ။ 💎 Gerund ကို ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုတာလဲ။ 💎 Infinitive ဆိုတာကရော ဘာလဲ။ 💎 Infinitive ကိုရော ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုတာလဲ။ ❤ အပိုင်း ၁ ❤ 👉 What isagerund? 👈 ✍ Gerund ဆိုတာ Verb တစ်လုံးကို (ING) ပေါင်းပြီး ရေးထားတဲ့… Continue Reading →
Subject-Verb Agreement (အပိုင်း ၂)
👉 Subject-Verb Agreement အပိုင်း ၂ 👈 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 Inverted Subject and Verb Agreement ✍Inverted Subject ဆိုတာ ဘာလဲ။ Inverted Subject ဆိုတာ Inversion ပုံစံရေးထား တဲ့ ဝါကျတွေမှာပါတဲ့ Subject ကို ဆိုလိုတယ်။ ရှင်း လိုက်တာ ပိုရှုပ်သွားပြီးထင်ပါတယ်။😊 တခါတလေ အဲလိုရှုပ်ထွေးနေတာတွေကို ရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Inverted subject အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Inversion ကို… Continue Reading →
Passive Voice Chart and English Tenses
# လေ့လာလို့အဆင်ပြေစေမယ့် Passive Voice Chart and English Tenses တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ #Credit Photo #Google
Subject-Verb Agreement (အပိုင်း ၁)
💎 Subject-Verb Agreement ဆိုတာ ဘာလဲ။ ✍ ဝါကျတစ်ကြောင်းတွင်ရှိသော Subj. နဲ့ Verb သည် ကိန်း အရ ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ ထိုသို့ ကိန်းအရ ကိုက် ညီမှုရှိခြင်းကို Subject-Verb Agreement လို့ ခေါ် တယ်။ ကိန်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ မြန်မာသဒ္ဒါမှာတော့ ဧကဝုစ်ကိန်း နဲ့ ဗဟုဝုစ်ကိန်းဆိုပြီး ခေါ်ကြတယ်။ ဧကဝုစ်ကိန်းဆိုတာ Singular number ဖြစ်ပြီး ဗဟုဝုစ်ကိန်းဆိုတာ Plural number ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး… Continue Reading →
# လေ့လာလို့အဆင်ပြေစေမယ့် Passive Voice Chart and English Tenses တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။ [Read More]
Subject-Verb Agreement Part II 👉 Subject-Verb Agreement အပိုင်း ၂ 👈 [Read More]
My Diary Thingyan
ငါတို့ကို လွမ်းဆွတ်စေမဲ့ အတာသကြန် ရောက်လာတော့မယ် ချစ်သူရေ… သိပ်ချစ်တဲ့ နင်နဲ့အတူတူ [Read More]
16$ တန်ဖိုး Airdrop No need KYC 💎 Argentas 💰 Free 12499 AXU ($16.24) 📈 [Read More]
condense of composition အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာပြန်နည်း ကျနော်က textကို စာမသင်ခင် ဒီဘာသာပြန်နည်းကို [Read More]
© 2020 myanmarpyi.com. All rights reserved.